-पाँचथरमा अचम्मको गाइ भेटियो ! थाहा पाएपछि मनिसहरु तिन छक्क, हेर्ने र ढोग्नेको भिड! - Online Tamang
-पाँचथरमा अचम्मको गाइ भेटियो ! थाहा पाएपछि मनिसहरु तिन छक्क, हेर्ने र ढोग्नेको भिड!
पाँचथरमा एउटा अचम्मको गाई छ । सो गाईले नौ वर्षदेखि लगातार दूध दिइरहेको छ । यस बीचमा गाई ब्याएको पनि छैन र थाकेको पनि छैन । यो गाई हो फिदिम नगरपालिका ११ निवासी नरमाया र तेजप्रसाद न्यौपानेको। २०६६ साल कात्तिकमा गाई ब्याएको थियो । त्यहा यता लगातार दूध दिइरहेछ। तेजप्रसादले नजिकैको फेवादिनका रामप्रसाद न्यौपानेको घरबाट २० हजार रुपैंयाँमा किनेका थिए ।
यो अचम्मको गाईले सधैं करिब दुई लिटर दूध दिइरहेको नरमाया बताउँछिन्। गाईले पहिलो र दोस्रो बर्ष ६ लिटर दूध दिएको थियो । तेस्रो बर्षवाट घटेर चार लिटर दिन थाल्यो ।गाई किन्दा तेजप्रसादका छोरा गणेश १२ कक्षामा पढ्थ्यो, उसले बीएड पास गरिसक्यो । त्यसपछि भाषा शिक्षा अध्ययन गरेर कोरिया गएको पनि ३० महिना पुरा भयो, गाई थाकेको छैन निरन्तर दूध दिइरहेछ ।
तेजप्रसाद भन्छन्, ‘पहिले दुःख थियो । छाप्रोमा बस्थ्यौं । गाई लक्षिनको भएकै कारण हो क्यार छोराले डिप्लोमा सम्मको अध्ययन पुरा गरेर कोरिया गएपछि कमाएर पठायो, दरबार जत्रै घर बनाएका छौं । अहिले छोराले पनि कमाइरहेको छ । गाईले निरन्तर दूध दिइरहेको छ।’
आफूले किन्नुपूर्व गाई तीन पटक ब्याएको उनी बताउँछन् । गाईले पुनः गोरु नमागेको र दूध पनि दिइरहेको न्यौपाने परिवारको भनाई छ । किनेर ल्याउँदा काखमा साथमा वाच्छी थियो । त्यो वाच्छी तीन बर्ष पालेर ६ हजार रुपैंयामा बेच्यौं, यहि गाईको आम्दानीले मालामाल भएका छौं भन्छिन् नरमाया । अहिले चलन चल्तीको मोल प्रति लिटर ५० रुपैंयाँ छ । गाईले दिएको दूधको मात्रै हिसाब गर्दा ६ लाख ६६ हजार हुँदो रहेछ । गाई लक्षिनको र विशेष भनेर गाउँघरमा मर्दापर्दा र हिन्दू संस्कार अनुसार मासिक श्राद्ध गर्दा यहि गाईको दूधबाट पिण्ड पाक्छ ।
गौमाताले हाम्रो मात्रै होइन छिमेकी र पितृहरुको पनि उद्धार गरेको उनी भन्छिन् । “राम्रो स्याहार गर्ने हो भने दूध अझै धेरै आउँछ, साँझ बिहान मात्रै होइन अन्य समयमा पनि सजिलै दूध दिन्छ । यीे गाई हाम्रो माता हुन्, यसलाई हामी आजीवन स्याहारसुसार गर्छाैं, जति मोल दिएपनि बेच्दैनौं’ नरमाया भन्छिन्।
विदेशी नश्लका गाई अहिले किसानको पहिलो रोजाई बनेका छन् तर स्थानीय नश्लको गाईले पनि मनग्ये प्रतिफल दिनसक्छ भन्ने तेजप्रसादको गाईले देखाएको छ । यस्ता स्थानीय गाईका नश्ललाई विकास गर्ने हो भने गौपालन व्यवसाय निकै फस्टाउने अपेक्षा गरिएको छ ।म नेपाली बाट
खासमा यौन चाहाना कम हुँदै जानुमा शरीरमा विशेष हर्मोनको कमी मुख्य कारण रहेको चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
यदि खानामा निम्न कुराहरुलाई नियमित समावेश गर्नु भो भने तपाइँको यौन क्षमता सधै सन्तुलित रहन्छ । जानिराखौं यौन इच्छा बढाउने खानाहरुः
१. खरभुजाः खरभुजा यति उपयोगी हुन्छ भन्दा तपाइँलाई अचम्म लाग्ला । तर यसले भियाग्राले भन्दा कम प्रभावकारी काम गर्दैन । खरभुजामा सिट्रयूलाइन नामक तत्व हुन्छ जसले शरीरमा रक्तसञ्चार बढाउँछ र कामेच्छा पनि वृद्धी गर्छ ।
हरियो, रातो वा कालो खुर्सानी नियमित सेवन गर्नाले सेक्स ड्राइभलाई सँधै ताजा राख्छ । खुर्सानीको सेवनले शरीरमा एण्डोर्फिन नामक रसायन बढ्छ र यौन चाहाना पनि सँधै ताजा रहन्छ । यौनिक क्षमता बढाउन खुर्सानी उपयोगी हुने चिकित्सकहरुको भनाइ छ ।
३. रेड वाइनः शोधकर्ताहरुका अनुसार रेडवाइन पनि यौन क्षमता वृद्धीका लागि उपयोगी छ । यसले महिलामा कामेच्छा बढाउँछ भने मांसपेसीमा हुने तनाव कम गर्छ । यसले मुड फ्रेस राख्ने र रक्त सञ्चार बढाउने हुँदा सेक्स ड्राइभका लागि अत्यन्तै उपयोगी छ ।
४. बटर पपकर्नः नौनी हालेको पपकर्नको सेवनले पनि यौन क्षमतालाई कायम राख्ने अध्यनले देखाएको छ । यसले यौन क्षमता बढाउन सहयोग पुग्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
अनार पनि यौन सन्तुलन कायम राख्ने उपयोगी फल हो । पुरुषमा हुने उत्तेजनाहिनको समस्या इरेक्टाइल डिस्फंक्शनको समस्याबाट बच्न अनार निक्कै उपयोगी मानिएको छ । अनारको सेवनले शरीरमा रक्त सञ्चार पनि बढाउँछ ।
६. लसुनः लसुन पनि यौन क्षमता वृद्धीका लागि निक्कै राम्रो खाना हो । यसमा सेक्स ड्राइभ बढाउन तत्व एसिलिन हुन्छ र यसले यौन क्षमतामा सन्तुलन राख्न सहयोग गर्छ ।
७. केराः शरीरमा सेक्स हर्मोन कायम राख्नका लागि केरा निक्कै उपयोगी मानिन्छ । यसले शरीरमा स्ट्रेस घटाउन र हर्मोन बढाउन अहम भूमिका खेल्न चिकित्सकहरु बताउँछन् । त्यसै गरी केरा सेवन गर्दा यसमा हुने ब्रोमेलाइन नामक इन्जाइमले पुरुषमा कामेच्छा बढाउने बताइन्छ ।-न्यूज२४नेपालबाट
Prev-यसकारण वैवाहिक जीवनभन्दा एकल जीवन उत्तम हुन्छ- विज्ञानले यसो भन्छ
Next-सुत्नु अगाडि यस्ता काम गर्नुहोस्, सफलताको शिखर चुमिनेछ.. जानी राखौ आजै बाट सुरु गरौ
-धादिङको मलेखुबाट नाइट बसमा किचकन्या चढेपछी हंगामा– (हेर्नुहोस भिडियो) (4)
-मात्र यत्ति काम गरेर हटाउनुस् तपाईको बोसोवाला भुडी अरु केहि गर्नुपर्दैन (भिडियो सहित ) (4)
-२०७५ सालमा कस्तो छ तपाईंको ग्रहदशा : यस्तो छ वार्षिक राशिफल (2)